Fanafihana antoandrobenanahary – Ambodifilao: nirefotra ny basy, tranombarotra sinoa voaroba | NewsMada
Nirefodrefotra nanaitra sy nampisahotaka ny mpiantsena maro tetsy Analakely, omaly antoandro ny poa-basy. Tranombarotra sinoa iray, etsy Ambodifilao no notafihin’ny andian-jiolahy mitam-piadiana. Nisy ny volabe voaroba tamin’izany, ankoatra ny mpiantsena naratra voatifitra.
Hatairana ny an’ny mpivarotra sy ny mpividy ary ny mpandalo teny Ambodifilao, omaly antoandro manodidina ny tamin’ny 11 ora sy sasany. Andian-jiolahy miisa dimy tsy nisaron-tava mitam-basy poleta sy antsy lava no nanafika tranombarotrana sinoa iray. Vokany, lasan’izy ireo ny volan’ireo tompon-trano miampy finday miisa efatra. Niparitaka samy namonjy ny ainy avy ny manodidina teny an-toerana. “Niditra toy ny mpividy entana maro ireo jiolahy, tsy nisy namantarana azy fa ny basy efa nipoaka tao anatiny no nanaitra sy nanaparitaka ny rehetra”, hoy ny filazan’ireo nanatri-maso. “Hadino teo an-tsena ny poketra nisy ny volako ary niverina aho naka izany. Teo no nahitako ny antsy lava nentin’ireo jiolahy” hoy ny mpivaro-boankazos teny akaiky. Nambaran’ny polisy fa nanapoaka basy inefatra ireo jiolahy ireo nandritra ny fanafihana ka lehilahy iray mpividy entana no naratra teo amin’ny lohany sy ny masony. Taorian’ny fanafihana, nirifatra nitsoaka namonjy an’Analakely ny lalan’ireo jiolahy sady nanao tifi-danitra.
Nitangorona teny amin’ny lavarangan’ny rihana ambonin’ilay tranombarotra ireo tompon-trano, mbola namaly tifitra anefa ireo jiolahy fa tsy nisy nahavoa azy ireo. Fiara iray nipetraka teny an-toerena koa no nanaovany tifitra. Ary nariany teny an-dalana ny sabatra nentin’izy ireo. Niantsoantso olona ireo jiolahy nandritra ny fitsoahany rehefa teny Analakely fa misy manafika ny grosista iray ao Ambodifilao. Vokany, maro ny olona nirohotra nanatona teo an-toerana. Fantatra fa polisy nandamina ny fifamoivoizana no tonga nialohan’ireo Gir sy ny BC ary ny maro samihafa, hoy hatrany ireo nanatri-maso. Manoloana izany, nitohy toy ny andavanandro ihany ny fifamoivoizana. Nanokatra fanadihadiana ireo polisy mahakasika ny tranga ka hita nandritra izany ny bala miisa telo sy antsy lavan’ireo jiolahy tamin’izany. Tsy nisy kosa ny aina nafoy, hoy izy ireo, ilay naratra kosa nentina teny amin’ny HJRA.
Fantatra fa misy ny fisafoana ataon’ny Emmoreg ankehitriny, ny polisy ihany koa manana ny paikady hampiasainy hisorahana ny asan-jiolahy. Omaly anefa nanafika tamin’ny andro antoandro ny jiolahy. Ilaina arak’izany ny fisafoana antoandro aman’alina, indrindra eny amin’ireo toerana be olona hisorohana ny tranga tahak’ity.